မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသော IDG Myanmar ၏အလုပ်များ | Work.com.mm
Thar Yar Shwe Pyi Yeik Mon, Thar Yar Shwe Pyi Street No.1(B)
IDG Myanmar Co Ltd isaBritish owned private company, part of IDG Group DMCC,agroup of international security companies,first registered in Singapore in August 2001 and now registered in several countries including Singapore, Thailand, Myanmar, Nepal, India, Afghanistan, UAE and UK. In addition to its current operations in Myanmar, Nepal, Iraq and Afghanistan, the IDG group has provided security services in the UK, Singapore, Turks & Caicos Islands and East Timor. IDG isasignatory to the UN Global Compact and conforms to the standards and obligations laid down by the International Code of Conduct Association for Private Security Service Providers (ICoCA). IDG Myanmar
ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားပိုင် Company ဖြစ်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေး အဖွဲ့ အစည်း DMCC ၏ရုံးခွဲ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
သြဂုတ်လ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် Singapore နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးမှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး အခြားရုံးခွဲများ ဖြစ်သော Thailand,Myanmar,Nepal,India,Afghanistan,UAE နှင့် UK စသောနိုင်ငံ များတွင် ဖွင့်လှစ် နိုင်ခဲ့သည်။
IDG သည် UN Global Compact နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စည်မျဉ်း စည်းကမ်း များကို (ICOCA) Standard နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး ယခုတွင်ပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးများဖြင့် UN အဖွဲ့အစည်းများ၊သံရုံးများ၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များ၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြို့ ပြအင်ဂျင်နီယာများအသင်း၊ ဟိုတယ်များ နှင့် အခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများကို ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ဥပဒေများအညီ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါသည်။
IDG Myanmar ကုမ္ပဏီအနေနှင့် လက်ရှိအချိန်တွင် အလုပ်ခေါ်ယူနေခြင်း မရှိသေးပါ။.